The World of Moe Thanzin: August 2009
ကျွန်မကလေ ငယ်ငယ်ကတည်းက နာမည်လှလှ ဆန်းဆန်းလေးတွေဆို သဘောကျတတ်ပြီး မှတ်မှတ်ထားတတ်တယ်... ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်မကြိုက်မိတာက မေမေကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့နာမည်.. "ပွင့်မြူးဇင်" ဆိုတာလေးပေါ့... မေမေက "မြူး" ဆိုတဲ့ စာပေတိုက်နာမည်လေးကို သဘောကျလို့ ဒီနာမည်ပေးခဲ့တာတဲ့... ပထမတော့အားလုံးက ခေါ်ရတာထောက်တယ်ဆိုပြီး ကန့်ကွက်ကြသေးတယ်တဲ့... နောက်တော့လဲ အဆင်ပြေသွားပါတယ်... အားလုံးက "မြူးမြူး" လို့ပဲခေါ်ကြတာကိုး... Blog လေးစရေးဖြစ်တော့လဲ "မြူးမြူး"လို့သုံးလိုက်သေးတယ်... နောက်တော့ "မြူးသျှရီလေး" နဲ့မှားမှာစိုးလို့ နာမည်အပြည့်အစုံပဲ ပြောင်းသုံးခဲ့တာ...
ကျွန်မညီမလေးရဲ့ "၀င့်ထူးဇင်" ဆိုတဲ့ နာမည်လေးကိုလည်း ကြိုက်တာပဲ... ကျွန်မနာမည်နဲ့ ကာရံညီတယ်လေ... မောင်လေးနာမည်က "ကြည်ဇော်ဇင်" ... ၈၈မှာ ကျည်ဆန်တွေကြားမွေးတာမို့ မေမေက ကျည်ဆန်ဇင်လို့ ပေးချင်တာတဲ့... အားလုံးဝိုင်းဖျက်ကြလို့... အဲဒီအချိန်မှာ ရေဒီယိုက ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်လွှင့်တယ်... ဇာတ်လိုက်နာမည်က ကြည်ဇော်တဲ့... အဲဒီ ကြည်ဇော်ဆိုတာလေးကို သဘောကျပြီး ကြည်ဇော်ဇင်ဖြစ်သွားတာပေါ့...
ပြီးတော့ ဖေဖေတို့မောင်နှမ ၇ယောက်ရဲ့နာမည်လေးတွေ... ဖိုးဖိုးကြီးနာမည်က ဦးဇင်ဆိုတော့ အားလုံးကဇင်တွေချည်းပဲလေ... သက်သက်ဇင်.. မြင့်မြင့်ဇင်.. ချိုနွယ်ဇင်.. ဆွေဆွေဇင်.. ဖေဖေက လွှမ်းမိုးဇင်.. ပြီးတော့ သိဂီင်္ဇင်.. ခွာညိုဇင်... ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေကဆို နာမည်မှာ ဇင်နဲ့ဆုံးတဲ့သူတိုင်းကို ကျွန်မအမျိုးလို့ကို ထင်တော့တာ... ဟိုတလောကတောင် အသိအစ်မကြီးတစ်ယောက်ကမေးတယ်... စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်တဲ့ အံ့ဘွယ်ဇင်ဆိုတာ မြူးမြူးတို့ အမျိုးလားတဲ့... မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေရတယ်... အဲဒီလောက် ဇင်များတဲ့အမျိုးလေ...
လေးတန်းတုန်းက ဆရာမတစ်ယောက်နာမည်ဆို ခုထိမှတ်မိနေသေးတယ်... "နီလာမြုတေ" တဲ့... ဆန်းတယ်နော်... ဆရာမကလဲ ချောချောလေး... သူ့နာမည်လေးနဲ့ လိုက်မှလိုက်ပေါ့... အဲဒီတုန်းကပဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လဲ ရှိသေးတယ်... သူ့နာမည်လေးက "ကျော့ယဉ်ဝင်း" တဲ့... သူ့နာမည်လေးကြားတာနဲ့ ကျော့ကျော့လေးကနေတဲ့ ယမင်းရုပ်လေးကို မြင်ယောင်မိသလိုပဲ... နောက်တစ်ယောက်က "နွေး" တဲ့... တစ်တန်းတုန်းကသူငယ်ချင်း... သူ့နာမည်လေးက တစ်လုံးတည်းနဲ့ ဆန်းတာလေ... GTC မှာပြန်တွေ့ကြတော့ သူကမမှတ်မိဘူးလေ... ကျွန်မကတော့ သူ့နာမည်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့တွဲပြီး ခပ်ချောချောသူငယ်ချင်းလေးကို မမေ့ခဲ့ပါဘူး...
GTC စတက်တော့ ပထမဆုံးခင်မိတဲ့ ကောင်လေးက "လရောင်ဝေး" တဲ့... ကဗျာဆရာ ဦးအောင်ဝေးရဲ့ သားကြီးပေါ့... သူ့ညီလေးနှစ်ယောက်က "လပြည့်ဝေး" နဲ့ "လမင်းဝေး"... နာမည်လေးတွေက အပျံစားလေးတွေနော်... လရောင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က "မင်းနေ၀န်း" တဲ့... Civil ကကောင်လေးတစ်ယောက်လဲရှိသေးတယ်... "ဆုမွန်ရ" ဆိုပဲ... ပေးလည်းပေးတတ်ကြတယ်နော်... နောက် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်... "အဏ၀ါကျော်ထွတ်" နဲ့ "ရာသက်ပန်ကျော်ထွတ်" တဲ့... ရာသက်ပန်ရဲ့ သားလေးက "ဒီပါကျော်ထွတ်" တဲ့...
Blog လောကထဲရောက်လာတော့လဲ နာမည်ဆန်းဆန်းလေးတွေ အများကြီးတွေ့ရသေးတယ်... ထင်းထင်း... လင်းကြယ်ဖြူ.. နေဒေးသစ်.. နဒီမိုးညို.. နိုင်းနိုင်းစနေ.. ပြည့်ဝတ်မှုန်.. မိုးခါး.. သီဟသစ်.. ညခင်း.. စန္ဒကူးမေ.. မြူးသျှရီ.. ဂျာမုန်း.. သုနှင်းဆီ.. အိမ့်ချမ်းမြေ့.. ဖြူစင်ကြယ်.. မဟာဆန်.. နွေးနေခြည်.. နေနေနိုင်.. ၀သန်မိုး.. အို... အမျာကြီးပေါ့... ဒါတောင် မှတ်မိသလောက်ချရေးထားတာ... အားလုံးရဲ့ နာမည်လေးတွေက လှလည်းလှ ဆန်းလည်းဆန်း....
သားသားအတွက်နာမည်ကိုတော့ သူ့ဦးလေး ကိုကြည်ဇော်ပေးတာလေ... နေ့သင့်နံသင့်ပေါ့... ကြာသပတေးသားလေးလေ... "မိုးသံစဉ်ကို" တဲ့... ခုလောလောဆယ်ရော နောင်ရော ကျွန်မအမြဲကြိုက်နေတော့မယ့် နာမည်လေးပါ... သားသားနာမည်လောက် လှတာလဲမရှိတော့ဘူးထင်နေတာလေ... အင်း.... ထမင်းတော့ ငတ်ဦးမယ်....
သူများတွေ Tag Game ကစားကြတာမြင်တော့ ကျွန်မလဲ Tag ချင်လာတယ်... ညီမလေးထင်းထင်း ညီမလေးမေဇင် နဲ့ မောင်လေးအရမ်းဖြစ်ချင်တဲ့ လင်းကြယ်ဖြူ တို့ကို Tag ချင်ပါတယ်... ကြုံဖူးတဲ့ နာမည်လှလှလေးတွေအကြောင်း ရေးပေးကြပါနော်...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 4:26 PM9comments:
တနေ့က ကျွန်မ သားသားကို ပုခက်ထဲထည့်လွှဲနေရင်းနဲ့ "မေမေ့သားလေးက အချောလေးနော်... သားလေးလောက်ချောတာဘယ်သူမှမရှိဘူး..." ဆိုပြီး သားလေးကို မြှုမိပါတယ်... အဲဒါကို ကျွန်မမေမေကကြားတော့ "အင်း... ထမင်းတော့ငတ်ဦးမယ်..."တဲ့.. ဘာလို့လဲလို့မေးတော့ ဒီအကြောင်းလေးကို ပြောပြတယ်...
ဒေါ်နုနဲ့ ဒေါ်ပုက တစ်ရပ်ကွက်တည်းသားချင်းတွေ.... မရင်းနှီးပေမယ့် မျက်မှန်းတော့တန်းမိနေတာပေါ့... သူတို့မှာ သမီးလေးတွေကိုယ်စီရှိကြတယ်... တစ်နေ့တော့ ဒေါ်နုက သူ့သမီးလေးဆီထမင်းသွားပို့မယ်လုပ်တုန်း ဒေါ်ပုတစ်ယောက် အလောတကြီးရောက်လာတယ်... သူ့မှာအရေးတကြီး ကိစ္စပေါ်လာလို့ သူ့သမီးလေးအတွက် ထမင်းဗူးကို လူကြုံပေးချင်လို့ပါတဲ့... ဒေါ်နုကလည်း ရပါတယ်ပေါ့... သမီးလေးနာမည်ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့ "နာမည်မလိုပါဘူး အစ်မကြီးရယ်... တစ်ကျောင်းလုံးမှာ အချောဆုံး ကလေးမကိုသာရှာလိုက်... အဲဒါကျွန်မသမီးလေးပဲ..." လို့ဖြေသတဲ့... ညနေကျောင်းလဲဆင်းရော ဒေါ်ပုသမီးလေးက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်... နေ့လည်စာထမင်းမစားရလို့တဲ့... အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်နုရောက်လာတယ်... ထမင်းဗူးလာပြန်ပေးတာလေ... ထမင်းကတော့ကုန်ပြီတဲ့... ဒေါ်ပုက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမေးတော့ ဒေါ်နုပြန်ဖြေလိုက်တာက... "နေ့လည်က ကျွန်မကျောင်းကိုရောက်သွားတော့ အချောဆုံးကလေးမကို သေသေချာချာရှာပါတယ်... ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့် ကျွန်မသမီးလေးကိုပဲ အချောဆုံးလို့ မြင်နေတာမို့ ထမင်းဗူးကို ကျွန်ကသမီးလေးကိုပဲ ကျွေးလိုက်တော့တယ်...." တဲ့လေ....
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 9:50 PM4comments:
Labels: My Lovely Son, Myself
****နေလောင် circuit တို့၏သမိုင်း ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးထဲက ကျွန်မရဲ့ကဗျာလေးပါ... ရူးလို့ကောင်းဆဲအရွယ်က ရေးခဲ့တာပေါ့... ****
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 10:22 PM3comments:
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 6:55 PM5comments:
****၂၀၀၄ သြဂုတ်လရဲ့ အပျိုစင်မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ကဗျာဟောင်းလေးပါ****
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 9:16 PM 8 comments:
မနေ့က အိမ်မှာကြာဆံချက် ချက်စားတယ်... ဒီမှာကကြာဆံချက်ထဲ ထည့်ရမည့် အမယ်တွေအစုံ အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရနေတော့ ခဏခဏချက်စားဖြစ်တယ်လေ... ချက်နည်းကလည်း လွယ်ပါတယ်...
ကြက်သားကို ငံပြာရည်နဲ့ပြုတ်ပြီး အသားနွှင်ထားပါ... ကြွက်နားရွက်မှိုခြောက်ကို ရေစိမ်ထားရပါမယ်... ဒယ်အိုးထဲ ဆီသင့်ရုံထည့်ပြီး ဆီပူလာတဲ့အခါ ထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကိုဆီသတ်ပါ... မွှေးလာရင်ငရုတ်သီးမှုန့်ပါထည့်ပြီး စိမ်းနံ့ပျောက်တဲ့အထိ မွှေပေးပါ... ပြီးရင် ခပ်သေးသေးဖဲ့ထားတဲ့ ကြက်သားတွေကိုရောထည့်ရပါမယ်... ကြက်သားတွေ ကျစ်သွာပြီဆိုရင် ရေစိမ်ထားတဲ့ ကြာဆံနဲ့မှိုခြောက်တွေကိုပါ ရောထည့်လိုက်ပါ... fish cake လှီးထားတာလည်း ထည့်ပါတယ်... ကြာဆံကိုဆီသတ်တဲ့အထဲ ထည့်လိုက်တော့ တော်ရုံနဲ့ ပျော်မထွက်သွားတော့ဘူးပေါ့... ပြီးရင်ရေလိုသလောက်ထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါ... ဆား တော်သလိုထည့်ပါ... ဆူလာရင် ကြက်သွန်နီ လေးစိတ်ခွဲထားတာထည့်ပါ... ကြက်သွန်နီတွေ နူးပြီဆိုရင်တော့... အသင့်ဖြစ်ပါပြီ...
သံပုရာသီး ကြက်သွန်နီနဲ့ နံနံပင်တွေကို ဒီလိုလေးလှီးလိုက်...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 7:52 PM5comments:
ညားခါစဇနီးမောင်နှံတစ်စုံတွဲ.. အိမ်အသစ်လေးဆီပြောင်းလာကြတယ်... မနက်မိုးလင်းတော့ ထမင်းစားခန်းထဲ မနက်စာစားကြတုန်း မိန်းမလုပ်သူက ပြတင်းပေါက်ကနေ တစ်ဖက်ခြံကိုလှမ်းကြည့်ရင်း...
"ကြည့်ပါဦးမောင်ရယ်... အ၀တ်တွေလျှော်ထားလိုက်တာ... စင်လဲမစင်ဘူး... အ၀တ်လျှော်ဆပ်ပြာကောင်းကောင်း မသုံးဘူးထင်တယ်.."
ယောက်ျားလုပ်သူကတော့ ဘာမှမပြော ခပ်ပြုံးပြုံးပဲ...
နောက်နေ့တွေမှာလည်း... တစ်ဖက်ခြံက အ၀တ်လှန်းထားတာမြင်တိုင်း မိန်းမက အပြစ်တင်စကားဆိုစမြဲပဲ...
"ဟယ်... ကြည့်ပါဦး... အ၀တ်တွေကလည်း ဖြူလို့သန့်လို့ပါလား... ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလိမ့်... ထူးဆန်းပါ့မောင်ရယ်.."
"အင်း ဟုတ်တယ်... မောင်မနက်က စောစောနိုးနေတာနဲ့... မောင်တို့အိမ်ပြတင်းပေါက်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တာလေ"
ဘာသာပြန်လေးပါ... ကျွန်မတို့လည်း သူများကိုအပြစ်မတင်ခင်... ကိုယ့်ပြတင်းပေါက်လေးကိုယ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ကြရအောင်လား... နော်...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 9:02 PM3comments:
ဒီ Walker လေးက မာမားဝယ်ပေးတာ...
သားသားက burger king လဲကြိုက်တယ်...
လုပ်ကြပါဦး... မေမေက သားသားကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာချထားပါတယ်ဗျိုး...
ဒီ High Chair လေးကို သားသားကြိုက်တယ်ခင်ဗျ..
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 9:40 PM4comments:
ဒီနေ့.... ကျွန်မမွေးနေ့ပါ... ၂၇နှစ်တင်းတင်းပြည့်တာပေါ့... ဘာမှတော့ ထူးထူးခြားခြားမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး... မေမေက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သွားလှူပေးတယ်... အလုပ်ဆင်းရတော့ ကိုယ်တိုင်တောင်သွားမလှူနိုင်ဘူး... Lunch Time တုန်းက Boss ကအပြင်မှာလိုက်ကျွေးတယ်... ဒီမှာကပြောင်းပြန်နော်... မွေးနေ့ရှင်ကို သူတို့က ကျွေးရတာ... ကျွန်မကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာမပျက်... လာလည်တဲ့သူတွေကို တစ်ခုခုကျွေးချင်ပါတယ်... ခုတော့မအားသေးလို့... လာမယ့် Long Weekends ကျရင် ဆက်ဆက်လာစားကြပါနော်...
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုမှာ... မောင့်ဆီက လိုချင်တဲ့ လက်ဆောင်အကြောင်းရေးဖူးတယ်... လိုချင်တာတော့မပေးဘူး... ကျွန်မအတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာတစ်ခု ၀ယ်ပေးတယ်လေ... အဲဒါဘာလဲ သိလား....
အင်း........ ကျွန်မ.. တော်တော်ဝနေပြီထင်ပါရဲ့...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 8:12 PM4comments:
သားသားက သီချင်းအရမ်းကြိုက်ပါတယ်... သီချင်းဆိုသိပ်မှအိပ်တာ... ကျွန်မသားသားကိုဆိုသိပ်နေကျ သားချော့တေးလေးတွေအကြောင်း ရေးပြချင်ပါတယ်...
အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး ပြေးပြိုင်ချင်သေး...
အိပ်မက်လှလှ မက်စေမယ်... "
အဲဒါက သားသားရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပေါ့... မူရင်းသီချင်းက သမီးလေးကိုသိပ်တဲ့သီချင်းဆိုတော့ နောက်ဆုံးတစ်ပိုဒ်က သားသားနဲ့မကိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်...
ပါးကွက်ကွက်ပေးမယ် နေတစ်ဖက် လတစ်ဖက်လို
မေမေ့ကျောင်းလည်း ဆင်းတော့တယ်.... သွားမယ်.... သွားမယ်...."
ဒီကဗျာတေးလေးကတော့ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က အဘောင်ရှင်ဆိုသိပ်နေကျပေါ့... စာသားလေးတွေ အရမ်းကြိုက်တယ်... ရှိသေးတယ်... ဘ၀မေ့တတ်တဲ့ မဗျိုင်းအကြောင်းရေးထားတဲ့ကဗျာလေး....
ဘုရင်ကြီး.. ဘုရင်ကြီး ဆင်ပြောင်ကြီးကိုစီး
ဒီကဗျာကတော့ ညီမလေး ထူးထူးငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းကြိုက်တာပေါ့... အိပ်ချင်ပြီဆိုရင်... "အဘောင်ရှင်ရေ ဇီးသီးကောက်မယ်" ဆိုပြီး အော်တော့တာပဲ....
"လှည်းယာဉ်ကလေးက ဂလုံ ဂလုံ ခြူလုံးတေးသံစုံ
မြင်းလှည်းလေးက ခွပ် ခွပ် အပြေးသူမရပ်
စက်ဘီးလေးက ကလင် ကလင် လမ်းကြိုလမ်းကြားဝင်
မော်တော်ကားကြီး ၀ီး ၀ီး တူပျော်ပျော်ခရီး
မီးသင်္ဘောကြီး တူ တူ မီးခိုးတလူလူ
ငှက်သမ္မာန်က ကျွိ ကျွိ လှိုင်းကတအိအိ
လေယာဉ်ပျံကြီး ၀ီ ၀ီ ကောင်းကင်ထက်မှာမြည်
မီးရထားကြီ ဂျုံး ဂျုံး လိုက်ပါရစေဦး..... "
ဒါလေးကတော့ မြည်သံစွဲ အလင်္ကာတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတာလေ... ဆိုလို့လည်းကောင်းတယ်... နားထောင်လို့လည်းကောင်းပါတယ်...
ကဲ................ အဲဒီကဗျာတွေအားလုံး ဆိုပြီးပြီဆိုရင်တော့... သားသားလဲအိပ်... မေမေလည်းမောပြီပေါ့...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 9:14 PM5comments:
မေး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံကိုပြောပြပါ။
ဖြေ။ နှစ် ၅၀ နီးပါး ခိုးလို့ရတာအကုန်ခိုးတာတောင် အခုထိမကုန်သေးလို့ပါ။
Source: Shwe Bo Thar
Credit to Ko Shwe Bo Thar & My cousin Yokeks.
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 12:29 PM 1 comment: